November 28, 2012ဇော်အောင် (မုံရွာ)
● ငွေလား၊ စိတ်ချမ်းသာမှုလား.. တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ဆိုရင် ရောင့်ရဲတင်းတိန်စိတ်ပျော်ရွှင်တဲ့ (စိတ်၊၀ိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ) ကို အဓိကထားမလား၊ ငွေကြေးနဲ့စိတ်ပျော်ရွင်စေတဲ့ (ရုပ်ဝတ္တုပိုင်းဆိုင်ရာ) ကို အဓိကထားမလား မေးခွန်းကောင်းတခုပါပဲ။
● အခြေခံ၊ အလုပ်သမား၊ လယ်သမားများအတွက် ကွန်မြူနစ်ပါတီတံဆိပ် အမှန်တကယ်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ Ideal ၀ါဒ (စိတ်ကူးယဉ်ဝါဒ) ဟုပြောနိုင်ပေမဲ့ ရာစုနှစ်တ၀က်လောက် ထိ အံ့သြဘွယ် ကွန်မြူနစ်စနစ်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းမှာ ကွန်မြူနစ်ဝါဒ ကျဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနဲ့အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လယ်သမားများကို အမြဲအားပေးတဲ့ သူဌေးကြီးတာဆင်..၀န်ကြီးချုပ်ဘ၀ထိ တက်လှမ်းခဲ့ဖူးပါတယ်။
● လယ်သမားများအတွက် အလိုအပ်ဆုံးအရာ လိုအပ်တဲ့ ချေးငွေကို ထုတ်ပေးဖို့ အစိုးရက ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လယ်သမား အမျိုးသမီးများကိုပဲ ငွေထုတ်ချေးတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံက Muhammad Yunus ဆိုသူ၊ ပါမောက္ခတစ်ဦးဟာ ၂၀၀၆ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကို ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ သူတည် ထောင်ခဲ့တဲ့ Grameen ဘဏ်ဟာ လယ်သမားများဘ၀ကို မြှင့်တင်တဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါပဲ။ အခု ၁၀နှစ်မကြာမီ အဲဒီဘဏ် ကြီးဟာ ထုံးစံအတိုင်း၊ အမြက်များများရတဲ့ စက်မှု၊လုပ်ငန်းရှင်၊ ငွေရှင်များရဲ့ ဘဏ်ဘ၀ကို ရောက်သွားပါပြီ။ လယ်သမား အကျိုးလုပ် တယ်ဆိုတာ .. ရေရှည်တောင့်ခံဖို့ မလွယ်လှပါဘူး။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:အတွေးအမြင်	Comments are closed.
ကာတွန်း ဘီရုမာ - အဘပျော်တဲ့ သင်္ကြန်	တူမောင်ညို - ပန်ဆန်းက ခေါ်မယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖြေ ဘာလဲ	ငြိမ်းချမ်းအေး - ပီတာဇော်မြင့် အမျိုးသားရေး အပင်းဆို့၍ တဒင်္ဂရူးသွားခြင်း	ငြိမ်းချမ်းအေး - ကိုယဉ်ကျေးများဖတ်ရန်	ဗိုလ်ထက်မင်း - ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင် တပ်မတော်သားများကို ဘာကြောင့် အဓမ္မ စစ်တိုက်ခိုင်းနေရတာလဲ? နိဂုံးချူပ် အပိုင်း ၇	ဖိုးထက် - ဆာ အဲလက်စ်၊ ဘောလုံးနှင့် ကျွန်တော်နားမလည်သောအရာများ	ခင်မောင်စော (ဘာလင်) - "ဗိုလ်" ဟူသောဝေါဟာရ	စံပယ်ဖြူ - အဆင်မပြေမှုများနဲ့ မြန်မာပြည်	ကာတွန်း ဘီရုမာ - နှစ်သစ်ကူးမြင်ကွင်း	ရန်လင်းအောင် - ကျစေလိုတဲ့ သင်္ကြန်	မိုးမခ Kindel Store
လူမှုရှုခင်း ကောက်စာများအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသော မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း နှင့် ရှေ့အနာဂတ်
မန္တလေး၊ ဘုရားကြီးဝင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးနေ့ ဖိတ်စာ
စာပဒေသာ ကောက်စာများငြိမ်းချမ်းအေး - "သေသော်မှတည့် သြော်ကောင်း၏” ခေတ်
သမိုင်းနဲ့ အစဉ်အလာ (601)
လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ (204)
Cartoon Box (1,518)
By admin ၂၀၁၅ နှစ်သစ်အတွက် အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၁ – မိုးမခလစဉ်မဂ္ဂဇင်း အခု...Read more » Recent Commentsmyomin on ဗိုလ်ထက်မင်း – ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင် တပ်မတော်သားများကို ဘာကြောင့် အဓမ္မ စစ်တိုက်ခိုင်းနေရတာလဲ? နိဂုံးချူပ် အပိုင်း ၇myomin on ဗိုလ်ထက်မင်း – ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင် တပ်မတော်သားများကို ဘာကြောင့် အဓမ္မ စစ်တိုက်ခိုင်းနေရတာလဲ? နိဂုံးချူပ် အပိုင်း ၇San Hla Gyi on ရန်ကုန်ထုတ် မိုးမခလစဉ်မဂ္ဂဇင်း တွဲ၂၊ အမှတ်၎ ယနေ့ ထွက်ပြီko zaw on ဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားများက မိမိတို့အပြစ်မရှိကြောင်း၊ လွှတ်တော်ကို စောင့်ကြည့်မည်နှင့် ဒေါ်စုနဲ့ တသဘောတည်း ရပ်တည်မည်ဟု ထုတ်ပြန်D on စိုးနေလင်း – ၈၈ နောက်ပိုင်း မြန်မာပြည်နဲ့ ၈၉ နောက်ပိုင်း တရုတ်ပြည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာကို အနည်းဆုံး ၁ ဒေါ်လာ လှူပြီး မိုးမခကို ကူညီပါ	မိုးမခမှာ ကြော်ငြာပါ